သဘာဝပန်းခြံများ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » သဘာဝပန်းခြံများ
Updated: 2016-03-09 15:06
အာရာမရု မီစခိ ပန်းဥယဉ်
အာမမီ ဂျူခေး မှာ တောင် လက် ချိုး ရေလို့ ရတဲ့ ရှု ခင်း ၊ မီစခိ ကနေ ပင်လယ်ပြင် ကြီး ကို ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။( အာရာမရု ) ဆို တဲ့ နာမည် က ကွန်းမိုရိလို အလုံး ကြီး နဲ့ တူနေတဲ့ တွက် ရရှိ လာ တဲ့ န...
Updated: 2016-03-09 14:50
Yoshinogari site ကျေးရွာ
Yoshinogari site ၊ ခမ်းဇခိ နဲ့ ယောရှိနော့ဂါရီ မြို့ မှာ ရှိပြီး ကျနော်တို့ နိုင် ငံ တော် ရဲ့ အကြီး မား ဆုံး သော ရ၇ိုးအိ ခောတ် ရဲ့ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲ့ဒီ ခောတ် တုံး က ကျေးရ...
Updated: 2016-03-09 14:28
ဟာကတ ပင် လယ် အော် နဲ့ သွယ် တန်းနေတဲ့ ကျွန်းဆွယ်လေး၊ ဥမိနော့နကမိချိ ရဲ့ အလယ်ဗဟို မှာ ရှိ ပြီး တစ်နိုင် ငံလုံး အတိုင်း အတာ နဲ့ အရည်အသွေး မြင့် တဲ့ seaside park ဖြစ် ပါတယ်။ ကျယ်ပြောလှ တဲ့ ဥယဉ်...
Updated: 2016-03-03 16:18
စတ ရှု ခင်း ပန်း ဥယဉ်
စတဟာ ဆို ရင် India နိုင် ငံ ရဲ့ နယူးဒေလီ နဲ့ အီဂျစ် က ကိုင်ရော့ တို့ နဲ့ ထပ် တး မြောက် ကျွန်း ၃၁ မျဉ်း မှာ တည် ရှိပြီး ဆောင်း ရာ သီ မှာ တောင် နွေးထွေး လှ တဲ့ ရာ သီ ဥ တု က ရှိ တဲ့ အတွက် စက်ကူပန်း...
Updated: 2016-03-03 15:41
ဟီရဂ၀ တိရိစာန် ဥယဉ်
ခရူး ရှူး မှာ ဆို ရင် တစ် နေ ရာ ထဲ သော ကိုအာလာ ၀က် ၀ံ နဲ့ တွေ့ ဆုံ နိုင် တဲ့ သဘာဝ တိရိစာန် ဥယဉ် ပဲ ဖြစ် ပြီး၊ ၂၀၀၉ခု နှစ် ကနေ အကြီး မား ဆုံး ဖြစ် အောင် ပြင် ဆင် ထားတဲ့ ခေါတ် မှီ တဲ့ ပုံ စံ ကို ပြသနေြ...
Updated: 2016-03-03 15:12
ခိရိ ရှိမား အနုပညာ တောကလေး
ခိရိ ရှီ မား တောင် တန်း တွေ ရဲ့ မြောက် ဖက် ခုရိနော့ဒခဲ ရဲ့ အမြင့် ၇၀၀ မီ တာ ၀န်း ကျင် အမြင့် မှာ ဖွင့် ခဲ့ပါတယ်။နက်နဲပြောင်မြောက် လှ တဲ့ အနု ပညာ တွေ နဲ့ သဘာဝအလှ တရား တွေ ကို တွေ့ ဆုံ လို့ ရတဲ့ တက...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များတောင်များ၊ ကုန်းပြေမြင့်များသဘာဝပန်းခြံများ
Updated: 2016-03-03 14:30
ရှိအိုး ဟိတရှီ ရေပူစမ်း ရောမ ပန်း ခြံ
စကမိုတို ရောမ က ဟန်း နီး မွန်း ထွက် လာ တဲ့ အချိန် ခဏတည်း ခို ခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ ရေပူစမ်း က ရှီ အိုး ဟိ တ ရှိ ရေပူ စမ်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ပန်း ခြံ အတွင်း မှာ တော့ (ရော မ ပြတိုက် ) (ရော မ နဲ့ နဂါး ကြီး က တွေ့...
Updated: 2015-06-17 10:43
ယုဖု ယုနို့ဟိရ သစ်တောပန်းခြံ
ယုနို့ဟိရရေပူစမ်းကိုဖြတ်ပြီး တောင်တန်းတွေတစ်လျှောက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရာမှ သစ်တောပန်းခြံသို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ၀၀၀၀ဟက်တာအကျယ်အ၀န်းရှိပြီး အမျိုးအစားများစွာသော အပင်များကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါ...